Fampiharana ny « couvre feu » ao Toamasina : Solombavambahoka iray nanda tsy hivoaka ny trano fisotroana | NewsMada
Par Taratra sur 15/04/2021
Manoloana ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana entina hiadiana amin’ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus, solombavambahoaka iray nanda hivoaka ny trano fisotroana tao Toamasina, ny alakamisy 2 marsa lasa teo, tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany alina. Araky ny didy navoaka mahakasika ny tsy tokony hisian’ny fivarotana zava-pisotro mahamamo misokatra intsony, manomboka amin’ny 9 ora alina, tonga hanakatona ilay toeram-pisotroana ny polisy tao an-toerana. Mbola tazana tao ny solombavambahoaka iray sy ny tomponandraikitra eo anivon’ny sampam-pitsarana ambaratonga voalohany Toamasina. Tsy namela ny hanakatonana ilay trano fisotroana io izy ireo ary nandrahona ireo mpitandro filaminana tonga tao an-toerana. Tetsy an-kilany, niantso ny lehibeny ny mpanao fisafoana ary samy tonga teo avokoa izy ireo. Tsy nanaiky fifampiresahana hivoaka ny trano fisotroana anefa ilay solombavambahoaka sy ny namany. Nitohy ny fandrahonana nataon’ ireto mpanao politika ary nampiaka-peo tamin’ ireo lehibena mpitandro filaminana. Niaka-pahatezerana ireto farany ka nikasa handrehitra ireny fitaovana mandatsa-dranomaso fampiasa an-trano ireny ka teo vao nivoaka moramora ireto mpanao politika sy mpahay lalàna.
Nivadika resaka politika…
Ny zoma, ampitson’ io ihany, nisy ny fivoriana nataon’ ireo mpiray antoko tao amin’ny trano fisakafoana tany amin’ny fokontany Analamboanio. Notarihin’ny solombavambahoaka voafidy teto Toamasina, teo ihany koa ilay depiote. Niezaka nanao tatitra tamin’ ity sekretera nasionalin’ny antoko ity izy nanararaotra nanadio tena ary nandiso ny fanatanterahan’ny
mpitandro filaminana ny asany. Raha nanontaniana ny zava-niseho tao kosa ny lehiben’ny fampanoavana ambaratonga voalohany Toamasina, “fiaraha-misakafo no nataonay tao ka efa eo am-pandoavana ny lany izahay, tokony ho tamin’ny 9 ora sy 15 minitra no tonga ny mpitandro filaminana”, hoy izy.